Chris Smalling Sheeko dheeraad ah Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Chris Smalling Sheeko dheeraad ah Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'Nickname'; 'Mike'. Our Chris Smalling Hooyo Qormo iyo warka Xuruufta Xogta waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo munaasabado la taaban karo ah laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan ka ah, nolosha qoyska, nolosha xidhiidhka iyo waxyaabo badan oo caddayn ah oo aan la ogeyn oo ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay awooddiisa difaaciisa, laakiin qaar ka mid ah tixgelinta Chris Smaling's Biography oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Chris Smalling Sheeko dheeraad ah Xogta Warka Xadida -Nolosha Hore
[Name Fll] Christopher Lloyd Smalling wuxuu ku dhashay da'da 22da maalinta November ee 1989 gudaha Greenwich, Boqortooyada Ingiriiska. Nasiib wanaag Sagittarius wuxuu ku dhashay hooyadiis, Theresa Smalling iyo aabihii, Lloyd Smalling.
Chris wuxuu ka mid yahay Jamaica oo ka soo jeeda qoyskiisa oo ku adkeysanaya waxbarashada kahor kahor ciyaaraha isboortiga. Si kastaba ha ahaatee, Chris wuxuu mar walba ku fekeray inuu yahay ciyaaryahan kubadda cagta ah maalintii iyo xitaa iskuulka. Hoos waxaa ku xusan Chris, oo siddeed jir ah, iyada oo walaalkiis ka yar Jason at Dugsiga hoose ee Root Meadow.
Sida shakhsiyadiisa caruurnimadiisa, Chris Smalling ayaa dib u ceshaday ka dibna wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo aamusan, oo aan jeclayn. Mar walbana waa uu isdifaacay oo si fiican u hadlay.
Inkastoo uu ku jiray dugsigiisii ​​hoose, Chris wuxuu isku dayay cayaaraha kale marka la barbardhigo jacaylkiisa kubada cagta. Wuxuu ahaa ciyaaryahan aad uwanaagsan oo rugby ah, oo ku takhasusay kubbadda kolayga iyo judo. Chris wuxuu bilaabay judo, inuu noqdo suunka cagaaran iyo kooxda da'yarta qaranka kahor intaan kubada cagta la wareegin.
Chris wuxuu ku biiray dugsiga sare ee dugsiga sare, Chatham Grammar School for Boy, halkaas oo uu qaangaadhka u yahay inuu isku dayo inuu siiyo isku darka kubadda cagta iyo waxbarashada. Tani waxay ku qeexday bilowgii kubbadda cagta.
Fursad buuxda ee riyooyinkan kubadda cagta ayaa ka bilowday da 'yar oo sagaal jir ah. Chris ayaa ku biiray kooxda kubada cagta ee Walderslade. Waxa kale oo uu sii wadaa Lordswood iyo Millwall oo ka socda 2002-2004 halkaasoo uu ku riixay darajada ugu sarraysa nidaamka dhalinyarada. Xaqiiqdii, wuxuu ahaa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhabarka.
Ciyaar kasta oo kubada cagta ah waxa ay ku guulaysatay wax walba oo Chris ah, laakiin wuxuu ku guuleystay inuu qabto shaqo. Xaqiiqdii, halka uu sanadka dhalin yaro, mar hore ayuu shaqeeyay garsoore hoteel. Sidii uu caqli ahaan u ahaa, Chris ayaa weli shaqo soo qabatay sababtoo ah hooyadiisu maaha mid hodan ku filan si ay u taageeraan. Wuxuu noqday waardiye hudheel ah. [Faahfaahinta Aabihiis wuxuu ka hadlay arinkaas dambe]
Smalling ayaa daraasad iyo safar dalxiis, daraasado saxaafadeed iyo daraasado ganacsi oo A-heerar ah, iyo sidoo kale dhaqaalaha heerka AS, iyo in uu ku guuleysto dhibco fiican dhamaan maadooyinka.
At 16, Smalling ayaa ku biiray Maidstone United oo ah koox aan ka tirsanayn kooxda non-league, si dhaqso ah ayey ugu soo baxday safka xiga ee 18s ka dibna ay noqoto kooxdii ugu horeysay ee ka ciyaaro Ryman League.
Waxay ahayd at Maidstone in uu ku koray si uu u gaaro sifooyinkiisa jirka, 6ft 4inch height iyo dabcan, uu cajiib Afro kaas oo isaga siiyey naaneysta 'Mashiinka'.
Chris ayaa jabiyay rikoorkii weynaa ee ahaa ciyaaryahanka ugu caansan ee ugu qaalisan kubada cagta ee horyaalka Ingariiska hoose. Tani waxay u keentay raadiyaha kooxda Middlesbrough, Charlton, Fulham, Chelsea, Reading iyo Arsenal. Waxa uu go'aansaday inuu ku soo bilaabo Fulham si uu ugu soo baxo si joogta ah.
Chris iyo hooyadiis ayaa markii ugu horeysay sameysay shaqadooda guriga, iyagoo booqday kooxaha kale ee waaweyn (Chelsea iyo Arsenal) si ay u xaqiijiyaan halka uu ku sii jeedi lahaa.
Hal maalin oo aamin ah, Hooyadiis waxay heshay wicitaan taleefan oo ka soo jeeda. Waxay la yaabtay, waxaana ka dhex muuqday codka Sir Alex Ferguson oo waydiiyay inay u ogolaan lahayd in wiilkeeda uu yimaado Masraxa Riyada. Dabcan, waxay ku jawaabtay Haa. [Faahfaahin buuxda ee wada sheekeysiga ku jira Chris Smalling Family Life].
27 Janaayo 2010, Manchester United waxay ku dhawaaqday inay la soo saxiixdeen Smalling, lacag aan la shaacinin. Tan waxaa lagu sharxay sida Chris Smalling uu si weyn ugu booday taariikhda jiritaankiisa. Inta soo hartay, sida ay yiraahdeen, hadda waa taariikh.
Chris Smalling Sheeko dheeraad ah Xogta Warka Xadida -Nolosha Xiriirka
Sam Cooke waa sawir gacmeedyada Ingiriisiga ah iyo gabadha Page 3 oo ka timid Manchester. Cooke wuxuu ka soo muuqday dhowr "British" oo ay ku jiraan FHM, FRONT, Maxim, Loaded, Zoo iyo Nuts ee UK, iyo sidoo kale dhowr daboolaya adduunka oo dhan.
Waa jacaylka Chris Smalling. Sam Cooke waa sanadaha 3 ee ka weyn kuwa Smalling. 2017, Chris ayaa go'aansaday inuu xiro sanduuqa Sam Cooke. Tani waxay dhacday ka dib markii ay ka soo horjeedeen Matteo Darmian iyo Phil Jones 'isla sannadkan.
Wiilka cusub ee wiilkiisa Victor Lindelof ayaa sidoo kale sabab u ahaa inuu u dabaaldego ka dib markii uu la qabsaday saaxiibkiisa Maja Nilsson. Wayne Rooney, Luke Shaw, Phil Jones ayaa ka mid ah kuwa kufsaday arooska saaxiibadood iyo asxaabtiisa.
Chris Smalling wuxuu jecel yahay inuu Jett u baxo Barbados, fasax kasta oo xagaaga ah si uu waqti fiican tayadiisa ugu helo jacaylkiisa.
Chris wuxuu si gaar ah jecel yahay in uu ku raaxaysto ciyaaraha gawaarida ee barxada meel qaali ah.
Saaxiibtinimada Barbados waxay ka bilaabantay 2013 xagaaga.
Chris Smalling Sheeko dheeraad ah Xogta Warka Xadida -Nolosha Qoyska
Chris Smalling wuxuu asal ahaan ka yimid asal hoose dhexe oo qoyskiisa ah ka hor inta uusan kubada cagta u bixin. Hooyada iyo kalyaha hooyadeed ayaa hadda wadaagaya guulaha dhaqaale.
GABAAN: Chris Smalling wuxuu ahaa shan jir markii uu aabihiis, Lloyd, oo geeriyooday. Qoyska waxay ka soo guureen Greenwich si ay u noqdaan guri aan caadi aheyn oo ku yaal Chatham, Kent, halkaas oo Theresa Smalling ay qortay Chris iyo walaalkiis ka yar Jason oo ka tirsan kooxda Walerslade Boys Club.
HOOYO: Hal hooyo. Ms Theresa Smalling ma lahan baabuur, iyo in kasta oo Millwall soo bandhigtay inay ka caawiso kharashka, ma aysan doonaynin in wiilkeeda yar oo u socdaalayay
Waxay ahayd Theresa Smalling hooyadiis oo telefoonka ku soo qaadatay guriga Chatham, si ay u maqlaan Scottish caan ah oo loo yaqaan 'Sir. Alex Ferguson] dhamaadka line. Sir Alex Ferguson ayaa ku baaqay inuu hooyada u xaqiijiyo Manchester Unitedoo ah bartilmaameedkii ugu dambeeyay ee ay bartilmaameedsanayso wiilkeeda, Chris, ayaa si fiican loogu ilaalin lahaa Waqooyi Galbeed.
'Aad ayaan u naxay,"ayuu yiri Theresa, 53. 'Waxay ahayd codka. Waxay ahayd sida aan TV-ga u ahaa.
'Waxa uu kaliya ku dhahay sida uu uula faraxsan yahay inuu la joogay Chris, sida uu u fiicnaan doono, waxaana uu iiga sheegi doonaa wax walba oo ay ku soo keceen.
'Ma rumeysan karay markii Chris uu ka yiri Manchester United, inkastoo aan jeclaan lahaa inay aheyd Arsenal. Waxaan ahay taageere Arsenal, Chris wuxuu ahaa markii uu yaraa. Laakiin waan ku faanayaa. "
Tan iyo markii ninkeeda geeriyooday, Theresa waxay ku jirtay cilaaqaad. Chris markiiba shaaca ka qaaday a twit erayadiisa ... "Hooyadeygu wuu jecel yahay Daley in ka badan". DHALINYARADA Daley waa adeer u ah Chris Smalling.
Chris Smalling Sheeko dheeraad ah Xogta Warka Xadida -Codsiga
Bishii Jannaayo 2014, Chris Smalling ayaa raali galin ka bixiyay go'aankiisa xun ee aan loo maleyneynin inuu yahay dharka is-qarxinta ee xaflad dhar ah.
Waxa uu dhaliyey caro ka dib markii lagu sawiray dharka Carbiska iyo qurxinta qaabka milatariga ah oo ay la socdaan guddi wareega wareega iyo cabirrada ku xiran. Smalling ayaa sheegatay in kooxdu ay isku dayday inay 'jimicsiga' isku daydo 'caansanaanta khamriga', taas oo loo maleynayo inay tahay sababta uu ugu xiray dhalooyinka Jagermeister iyo Red Bull suunkiisa sida bam gacmeedyada.
Khasaaraha ayaa sababay cillado ka mid ah kuwa ka badbaaday iyo qaraabada dadka ay saameeyeen weerarrada argagixisada. La hadlaya Qorraxda aabaha nin dhalinyaro ah oo ku dhintay weerarkii argagixisada ee 7 2005 ee magaalada London wuxuu sheegay inuusan xukumi karin kharashka ku filan ".
Wiilka Oldham ee Graham Foulkes, 61, oo wiilkeeda 22-da dhashay ee lagu dilay Edgware Road isagoo is qarxiyay Sidique Khan ayaa ku daray: 'Waa mid ka mid ah waxyaabihii ugu xumaa ee aan abid arko'.
Jacqui Putnam, oo ka badbaaday qaraxa waddada Edgware Road ee 2005, ayaa sheegay in dadku ay tahay inay 'laba jeer fikiraan' ka hor intaan la helin iftiin argagixisanimo.
Chris Smalling Sheeko dheeraad ah Xogta Warka Xadida -Personality
Chris Smalling wuxuu leeyahay astaamaha soo socda ee shakhsiyadiisa.
Chris Smalling xoojinta: Waa caan ah, midnimo, dareen weyn oo sharaf leh.
Chris Smalling Qanacsanaanta: Ballanqaadka wax badan oo ka soo bixi kara, oo aan dulqaad lahayn, wuxuu sheegi doonaa wax kasta oo aan loo baahneyn sida jajabnaanta.
Maxaa Chris Smalling uu jecelyahay: Xorriyadda, safarka, falsafadda, inaad dibadda joogtid
Maxay Chris Smalling nuujiyaa: Dadka dabiiciga ah, oo ah xannibaadyo, fikrado ka baxsan dusha, faahfaahin
Murugo iyo firfircoonaan, Sagittarius waa mid ka mid ah safarrada ugu weyn ee dhammaan calaamadaha maskaxda. Fikradda furan iyo falsafada fekerka ayaa dhiirrigeliya iyaga inay ku wareegaan dunida oo dhan iyagoo raadinaya macnaha nolosha.
Sagittarius waa mid furfuran, rajo wanaagsan iyo xiiso leh, oo jecel isbeddelada. Sagittarius-born ayaa awood u leh inay beddelaan fekerkooda ficil dhab ah waxayna sameyn doonaan wax kasta oo lagu gaaro hadafyadooda.
Chris Smalling Sheeko dheeraad ah Xogta Warka Xadida -Isaga Jamaica
Goolhayayaasha: Jamal Blackman iyo David James.
Daafacyada: Kyle Walker, Sol Cambell iyo Danny Rose
Ciyaartoyda: Jermaine Jenas, Ravel Morrison, Ashley Young, Shaun Wright-Phillips, Alex Oxlade-Chamberlain, John Barne iyo Aaron Lennon.
Weeraryahan: Theo Walcott, Raheem Sterling, Andy Cole, Dwight Yorke, Daniel Sturridge, Luther Blissett iyo Ian Wright.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhrinta Chris Smalling ee Sheekada Carruusha iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer